Maxkamad ku taalla Kampala ee dalka Uganda ayaa dambi ku heshay Isa Ahmed Luyima (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Maxkamad ku taalla Kampala ee dalka Uganda ayaa dambi ku heshay Isa Ahmed Luyima (Daawo Sawirada)
Maxkmad ku taalla dalka Uganda ayaa ku heshay Cisa Axmed Luyima, in uu ahaa ninkii soo agaasimay qaraxyadii 2010-kii ay kooxda Shabaab ku qaaday Kampala.
Waxaa lagu wadaa in xaakima uu go’aan ka gaaro 12 qof oo kale oo ninkan la eedaynsaa.
Waxay isugu jiraan 5 u dhalatay Uganda, lix u dhalatay Kenya iyo 2 u dhalatay Tanzania.
Xaakiimka maxkmadda,lfonso Owiny-Dollo, ayaa haseyeeshee, sheegay in raggani aan lagu tilmaami karin in ay ka tirsanaayeen urur argagxiso, maadama dawladda Uganda aysan u aqoonsanyn Al-Shabaab in ay tahay urur argagxiso sanaddii 2010-kii.
In ka badan 70 qof oo daawanaysay cayaartii kama dambaysta ee Koobka Adduunka ayaa ku dhintay qaraxyadaasi.
Mudo lix sano ku dhow ayay qaadatay in raggani la maxkamadeeyo.
Waxay ku doodeen in sirdoonka dalalka Britian iyo Maraykanka ay jirdileen, balse maxkmadda dastuuriga ay Uganda ayaa eedayntaasi ku gacan sayrtay.
Billowga dhagaysiga xukunkan ayaa saacado dib loo dhigay maanta kadib markii ay korontada maxkmadda go’day.
Ammaanka maxkmadda ayaa aad loo adkeeyay.
Dowladda Uganda waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan askeri oo Alshabaab la dagaalama.
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo maanta magacaabay Saddex Safiir